Mifandraisa aminay | WoopShop
Ivotoerana serivisy ho an'ny mpanjifa
Raha mila fampahalalana momba ny serivisy alohan'ny famarotana na aorian'ny fivarotana toy ny baiko farany nataonao, ny fividianana, ny fandoavam-bola, ny fandoavam-bola, ny fandefasana na ny fizotran'ny fifandirana, dia iangavio ny Woopshop.com amin'ny alàlan'ny chat live na E-mail. support@woopshop.com ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia hamaly amin'ny ankapobeny ao anatin'ny 24 ora.
WoopShop.com dia tranokala ambongadiny sy mpamatsy. Ny vokatra rehetra ao amin'ny WoopShop dia avo lenta ary azo amidy amin'ny vidiny ambongadiny. Tsy mora toy izany ny mividy vokatra lamaody ambongadiny amin'ny tsena ambongadiny sinoa. Mba hanampiana ny mpivarotra antsinjarany sy ny mpamatsy ambongadiny hampitombo ny varotra sy hampitombo ny orinasany, mampifandray ny mpanjifantsika amin'ny mpamokatra ambony izahay. Mora sy tsy misy risika ihany koa ho anao ny fanombohana ny orinasanao manokana miaraka amin'ny fanampian'ny WoopShop ambongadiny sy ny serivisy fandefasana entana. Ny trano fitahirizan-tenanay any Eropa, Etazonia sy Kanada, Aostralia ary Sina dia azonao ampiasaina.
Ho an'ny fivarotana mahomby sy manary serivisy fandefasana entana dia azafady mifandraisa info@woopshop.com